ဆန္ဒပြ ​လက်မှတ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ဆန္ဒပြ ​လက်မှတ်​
Posted by ko six on Jun 28, 2014 in Poetry | 11 comments
၀ါတိုင်းရွှေ.. ဆိုပဲ.. ။ ။
ရူးတာမမှန်ရင် သူများတွေ ကို ပါ ထိခိုက်ပြီး ပိုဆိုးကုန် မလားဘဲ။ :-)))
ကျွန်တော်တော့ အဲဒိလက်မှတ်ကို မထိုးရသေးဘူးဗျာ…. ကျွန်တော်သိချင်နေတာ ပြင်မယ်ဆိုတော့ ပြင်မဲ့စာသားကို ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ…… ၄၃၆ ထဲမှာ ဘာတွေပြင်မှာလဲ….. မသိဘဲနဲ့ လက်မှတ်ထိုးရမှာ… ကျွန်တော်ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော်လိုက်မေးတော့ သိဘူးတဲ့ဗျ . . .
ပုဒ်မ ၄၃၆ တွင် “(က) ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အခန်း(၁) ပုဒ်မ ၁ မှ ၄၈ ထိ၊ အခန်း(၂) ပုဒ်မ ၄၉ မှ ၅၆ ထိ၊ အခန်း(၃) ပုဒ်မ ၅၉၊ ၆၀ ၊အခန်း (၄) ပုဒ်မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန်း(၅) ပုဒ်မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန်း(၆) ပုဒ်မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန်း(၁၁) ပုဒ်မ ၄၁၀ မှ ၄၃၂ ထိ၊အခန်း (၁၂) ပုဒ်မ ၄၃၆တို့ရှိ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ၍ ဆန္ဒမဲ
ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော် ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ မှအပ အခြား
ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ထောက်ခံဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမည်။ဟုလည်းကောင်း
အထက်ဖော်ပြပါ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၃ ခုကို လေ့လာလျှင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေသည် မ ဆ လ တပါတီ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေနှင့် ကန့်သတ်ပုံခြင်း တပုံစံတည်း ဖြစ်နေသည်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်က ၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်မများကို လုံးဝကန့်သတ်ထားချက် မပါရှိပါ။ ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန်လည်း မလိုအပ်ပါ။ ကိုယ်စားလှယ် အမတ် သုံးပုံ နှစ်ပုံမဲဖြင့် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် သာဓကကို တွေ့ရပါသည်။
လက်ရှိ အာဏာရ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရနှင့် ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်ကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် တမိုးလုံး ဖျောက်ဆိတ်ဟု ပြောရမည့် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် တပ်မတော် လူထွက် ကြံ့ဖွံ့အမတ်များက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင်
၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင် နေရာယူထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်
ကြံ့ဖွံ့နာယက ဗိုလ်သန်းရွှေ ရေးဆွဲထားခဲ့သော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်
အစားထိုးရန် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ပြင်ဆင်ရန် အလွန်ခက်ခဲလွန်းသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထား
သည်ကိုသာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ဆိုပါလျှင် ပုဒ်မ ၄၃၆ (က) (ခ) တခုလုံးကို ပယ်ဖျက်ပစ်ရပါမည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကဲ့သို့သာဖြစ်သင့်ပါသည်။ ကန့်သတ်ပုဒ်မများ လုံးဝမပါရှိဘဲ၊ သုံးပုံနှစ်ပုံ မဲဖြင့် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်နိုင်ရပါမည်။
ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော် ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမည်။
အဲဒီနေရာမှာ.. ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးဆိုတာကို..အထူးထောက်ပြချင်တာပါ…။ “ဆန္ဒမဲပေးသူအားလုံး” ဆိုတာနဲ့ လုံးဝမတူပါ..။
ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ဆိုတာမှာ..နိုင်ငံတွင်း/နိုင်ငံပနေ အသက်ပြည့်ပြီးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုဆိုလိုနေတာမို့..တော်တော်…တော်တော့်ကိုခက်တယ်လို့.. ယူဆရမယ်ဖြစ်ကြောင်း…။
၄၃၆ ကိုပြင်ချင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းက ခြေဥ ကိုပြင်ရအရမ်းခက်အောင်လုပ်ထားတာမို့လို့ပါ။ တကယ်လေ့လာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဆန္ဒပြုလက်မှတ်ထိုးဘို့ဖွင့်ပေးထားတဲ့နေရာ တိုင်းမှာ အတိုချုပ်မှတ်စုလေးတွေ အသင့်ချပေးထားပါတယ်။ သွားယူ ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောတူမှလက်မှတ်ထိုးပါခင်ဗျာ။
လက်မှတ်စုဆောင်းရခြင်း နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက် တစ်ခုက ၂၀၀၈ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြည်သူတွေ လက်မခံနိုင်ကြောင်း အင်အားပြရာရောက်တာမို့ပါ။ ကျနော့်အကျိုး လုံးဝ မပါပါ။ နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေ စစ်ဘိနပ်အောက်က လွတ်မြောက်စေချင်လို့ လက်မှတ်ထိုးပေးဘို့ ပန်ကြားပါရစေခင်ဗျာ။ With respect.
သများနားလည်တာတမျိုး.. သူတို့ကွန်မင့်တွေက တစ်မျိုး..
ကိုစစ် ရေးတာက သူ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သူပါ ခွစ်ရဲ့။
သများတို့ က ၄၃၆ ကိစ္စရှင်းရင်း အဲဒီဘက်ရောက်သွားလို့ပါ၊